Ny fakan-tsary amin'ny vatana mety tsy ho faran'ny farany | Vahaolana OMG
Ny fakan-tsary amin'ny vatana mety tsy ho Didy farany
Ny hevitra dia manangana fa rehefa misy fakantsary vatana ny kapika tsirairay dia raisina amin'ny fifampitifirana ny polisy sy ny fampiasana herisetra hafa satria «izay tena nitranga» dia ho azo alaina anaty horonantsary mba ho hitan'ny rehetra. Ny fakantsary vatana dia fitaovana ilaina amin'ny fangaraharana. Saingy mbola mila manao bebe kokoa ny sampana polisy hanatsarana ny fangaraharana sy ny fandraisana andraikitra.
Tsy isalasalana fa ny fakan-tsary toy ny cams, cams an-tariby ary ny cams fanaraha-maso dia afaka manome fomba fijery tokana momba ny fihaonan'ny polisy ary, amin'ny ankamaroan'ny tranga, dia azo inoana fa manampy ny manamboninahitra. Saingy sahala amin'ireo fitaovana hafa ireo, ny fakantsary iray napetraka amin'ny fanamianao na eo an-dohanao dia misy fetrany mila jerena ary jerena rehefa manombatombana ireo sary.
Ny fakantsary iray dia tsy manaraka ny masonao na mahita araka ny fahitan'izy ireo
Tsy manaraka ny mason'ireo miakanjo ny fakantsary satria misy ny hetsika amin'ny fivoarana ankehitriny, tsy fakan-maso ny fakan-tsary. Io fitaovana sarotra io dia afaka manaraka ny hetsiky ny masonao ary superimpose amin'ny faribolana mena kely misy horonantsary izay manamarika tsara ny toerana alehanao avy amin'ny mikroskondona iray mankany amin'ny manaraka.
Misy fakantsary fakana sary maka sary misimisy kokoa fa tsy afaka manome antontan-taratasy izany izay ahitanao eo no ho eo. Raha mibanjina lavitra ny toerana misy ny fakan-tsary ianao dia mety tsy hahita fihetsika ao anatin'ny tontolon'ny fakantsary izay toa mipoitra eo alohan'ny masonao.â € ™ Misy fisarahana lehibe eo anelanelan'ny sahananao sy ny fakan-tsary. . Taty aoriana, misy olona mandinika izay nalaina tamin'ny fakantsary ary mitsara ny fihetsikao dia mety hanana fahatsapana lehibe hafa ny zava-nitranga avy eo nitranga tamin'ny fotoana nitrangan'izany.
Ny hafainganam-pandehan'ny fakan-tsary dia hafa noho ny hafainganan'ny fiainana
Satria ny fakantsary vatana dia mirakitra haingam-pandeha ambony kokoa noho ny trano fivarotana mahazatra na fakan-tsary fanamorana fanitsiana, tsy azo inoana fa ho very ny antsipirihany manan-danja ao anatin'ny hantsana millisecond eo anelanelan'ny rindran-tsary, toy ny mitranga indraindray amin'ireo fitaovana cruder ireo. Ny olona tsy mahalala ny fizotry ny fanehoan-kevitra dia tsy mahatsikaritra izany rehefa mijery ny rakitsoratra. Mieritreritra izy ireo fa mifikitra amin'ny hafainganam-pandehan'ny hetsika ilay tompon'andraikitra satria voarakitra ny fakantsary. Noho izany, raha tsy misy fampahalalam-baovao, dia tsy takatry ny sain'izy ireo ny fomba ahafahan'ny manampahefana iray hamonoana ny fihodinana ao ambadiky ny ahiahy na hitifitra tifitra fanampiny rehefa tapitra ny fandrahonana.
Ny fakantsary iray dia mety hahita tsara kokoa noho ny ataonao amin'ny hazavana ambany
Ny fakantsary teknolojia avo lenta amin'ny sary dia ahafahan'izy ireo mirakitra an-tsoratra miaraka amin'ny mazava ao amin'ireo toerana ambany maivana. Rehefa naseho ny sary nihetsika farany, dia mety ho afaka hahita ireo singa ao amin'ny seho amin'ny antsipirihany fatratra kokoa noho ny azonao tamin'ny fotoana nihetsika ilay fakan-tsary. Etsy ankilany, tsy dia mandeha tsara amin'ny fifindran'ny jiro foana ny fakan-tsary. Mandeha tampoka avy amin'ny hazavana sy ny hazavana na ny mifanohitra amin'izany, ny fakantsary iray dia mety handratra vetivety tanteraka ny sary.
Ny vatanao dia mety hanakana ny fomba fijery
Firy amin'ny toe-javatra iray no nakan'ny fakan-tsary nisoroka tanteraka amin'ny toerana misy azy ary aiza ny hetsika. Miankina amin'ny toerana sy ny zoro, ny sary dia mety ho voasakan'ny faritra ao amin'ny vatanao, manomboka amin'ny oronao mankany an-tananao. Tsy zakan'ny fakantsary ny maka sary 360degree ny toe-javatra mety hitranga. Ity zavatra ity dia tsy afaka manome antsika sary marina ny zava-nitranga. Raha toa ianao ka mitifitra basy na Taser, ohatra, ny fakan-tsary eo amin'ny tratranao dia mety tsy mirakitra mihoatra ny sandrinao sy ny tananao. Na ny fanakorontanana ny fihetsikao fotsiny dia mety tsy hahalala ny fijerin'ny fakantsary. Fotoana tsikera ao anatin'ny tarehin-javatra iray izay ahitanao fa mety tsy hain'ny camian'ny vatanao intsony ianao noho ireo dinamika ireo, amin'ny farany manjavona izay mety ho hitan'ny mpamerin-dresaka mba hanaovana fitsarana ara-drariny.
Ny fakantsary iray ihany no voarakitra ao amin'ny 2-D
Satria ny fakantsary dia tsy firaketana ny tanimbary ny refy fahatelo izay hitan'ny mason'ny olombelona fa marina ny fitsarana ny halaviran'ny dian-dry zareo. Miankina amin'ny lesoka voakasik'izany, ny fakantsary dia afaka manindrona elanelana misy eo amin'ireo zavatra na manakaiky azy ireo akaiky kokoa noho ny tena izy, raha tsy misy elanelana araka ny tokony ho izy dia mety diso ny mpandinika iray ny haavon'ny fandrahonana atrehin'ny manampahefana iray. Misy fomba ara-teknika hamaritana ny halaviran'ny rakitsoratra 2-D nefa tsy dia fantatra na alain'ny ankamaroan'ny mpanao fanadihadiana izany.
Ny fakantsary iray dia mety tsy ampy
Arakaraka ny fakan-tsary no misy ny firaketana hetsika an-kery, ny fotoana mety hisian'ny fanazavana bebe kokoa ny tsy fahatokisana. Ny zoro, ny jiro ambient, ary ny singa hafa dia saika tsy miovaova amin'ny fomba fijerin'ny manamboninahitra iray mankany amin'ny iray hafa, ary ny fanarenana ny fantsom-piainana dia hanome fampahalalam-baovao bebe kokoa hahafantarana ny dinamika ny zava-nitranga. Ny fihetsika toa fihetsika tsy mitovy amin'ny zoro iray dia toa voamarina tsara amin'ny fomba hafa.
Eritrereto ny fandalinana ny lalao amin'ny lalao baolina kitra. Amin'ny famahana ireo antso akaiky, ny mpitsara dia te-hijery ilay hetsika amin'ny fakantsary marobe araka izay azo atao mba hahatakarana tanteraka ny fahitan'izy ireo. Raha ny tsara indrindra, mendrika ny hisaina ihany koa ireo mpiandraikitra. Ny olana dia matetika fa ny fakantsary tokana no voakasik'izany, raha oharina amin'ny ampolony iray izay mety hanadihady amin'ny hetsika ara-panatanjahantena, ary amin'izany tranga izany, ny fetra dia tokony hotadidina na dia hazavaina aza.
Ny fakantsary iray dia tsy afaka misolo ny fanadihadiana lalina
Rehefa manohitra mitafy fakantsary ny manamboninahitra dia indraindray ny sivily no mihevitra fa matahotra izy ireo â € œtransparency.â € Fa matetika izy ireo no miahiahy fa homena alalana tsy azo atao ny firaketana fakantsary, raha tsy manokana, mavesatra amin'ny fitsarana azy ireo. Ny fandraisam-peo fakantsary dia tsy tokony hoheverina ho fahamarinana ihany momba ny tranga iray mifanohitra. Mila mandinika sy voasedra manohitra ny fijoroana ho vavolombelona, ​​ny forensika, ny filazan'ny manamboninahitra mirotsaka, ary ny singa hafa amin'ny fanadihadiana tsy miangatra, tsy misy fiangarana, izay mandinika tsara ny zava-dehibe ataon'ny olombelona. Ny fetran'ny cams amin'ny vatana sy ny hafa dia mila takatra tsara ary nohombana mba hampitomboana ny fahombiazany ary hanome toky fa tsy raisina ho bala tsy tratry ny «bullet incurs» izay ataon'ny olona izay tsy mahatakatra tanteraka ny tena zava-misy ananan'ny hery dynamics.
Tsy namily ny fakantsary â € œonâ € ny tomponandraikitra
Ny fandinihana nataon'ny Departemantan'ny polisy New Orleans dia nahita tranga saika 100 izay nampiasain'ny polisy ary nitazona fakantsary vatana nefa tsy nomen'izy ireo kosa.
Ny volana septambra lasa teo dia polisy roa tao Vermont no nitifitra ary namono olona iray, raha samy nitondra fakantsary vatana. Tsy nisy tompon'andraikitra nitifitra azy ireo talohan'ny tifitra. Samy voadio avokoa ny zava-dratsy rehetra.
Talohan'ny nandondohany ny nifin'ny vehivavy, Daytona Beach, Florida, dia nanala ny fakantsary vatany ny tompon'andraikitra.
Tamin'ny volana septambra, ny polisy tany Washington, DC, dia nitifitra an'i Terrence Sterling, lehilahy mainty hoditra 31 iray tsy misy fitaovam-piadiana, taorian'ny lozom-patin'ny moto azy. Saingy mifanohitra amin'ny politikam-paritry ny Distrika, tsy nisy na iray aza tamin'ireo tompon'andraikitra teny an-toerana nihetsika ny fakantsariny raha tsy aorian'ny tifitra. Ny haino aman-jery namoaka ny tanàna dia namabo ny fotoana farany an'i Sterling, saingy nanomboka tao anatin'ny iray minitra monja ilay horonantsary taorian'ny tifitifitra. Ny raharaha dia manao famotorana ataon'ny birao amerikanina mpisolovava. Ankehitriny, mpiasan'ny DC dia takiana amin'ny fanamafisam-peo fa nihetsika tamin'ny fakantsary vatany izy ireo rehefa namaly antso na nifampitaona tamin'ny vahoaka.
Iza no Mitendry Technology Camera-Technology
Betsaka ny departemantan'ny polisy no mampiasa fakantsary vita amin'ny vatana izay nataon'i Axon (Taser taloha), izay manome fakantsary maimaimpoana sy mivarotra serivisy fitahirizana angon-drakitra. Ny mpivarotra hafa dia ny Aventura, Black Mamba, Security BrickHouse, Brimtek, COBAN, Data911, DEI, Digital Ally, FlyWIRE, Fitsarana Iraisam-pirenena, GoPro, HauteSpot, HD Protech, Kals Signals, L-3 Mobile-Vision, Law Systems, Marantz Professional, Martel, Motorola, Panasonic, Patrol Eyes, Paul Conway, Pinnacle, PRG, Primal USA, Utility Inc., PRO-VISION, Fampisehoana Media, Fahasalamam-bahoaka, Fahitana fiarovana, Titan, Fitaovana, VIEVU, VP360, WatchGuard, WOLFCOM, Zepcam, ary Zetronix.
Ankoatra ny fivarotana fakantsary vatana, ny mpivarotra sasany dia manome tahiry data ihany koa. Ohatra, mpamatsy fakan-tsary miaro tena amin'ny OMG dia manome ny fitahirizana anatiny sy carte SD, ary manana ny orinasa http://omg-solutions.com/ .
Stephon Clark, lehilahy afrikanina-amerikana, novonoin'ny polisy Sacramento tao amin'ny tokotanin'ny renibeny, manao fihetsiketsehana manohitra ny hetsiky ny polisy ny olona. Ny polisy tamin'ny voalohany dia nilaza fa nihevitra izy ireo fa nitam-piadiana i Clark. Saingy taorian'ny fifampitifirana dia tsy nisy fitaovam-piadiana tamin'i Clark ny manampahefana, iPhone ihany. Namaly haingana ny hetsi-panoherana ny lehiben'ny polisy ao an-tanàna tamin'ny alàlan'ny fanomezana an-tsary ny bodycam hanaovana ezaka hanampiana ny vahoaka, nefa tsy tsikaritry ny tena zava-nisy. Saingy tsy mahavaha ilay olana ny horonantsary.
Ny fisafotofotoana noho ny trangan-javatra avo lenta ary ny fanovana ny hevitry ny besinimaro dia nahatonga ny departemanta polisy nanerana ny tany mba hanomezana mpiasa bebe kokoa amin'ny fakan-tsary sy hanampiana fiofanana amin'ny haingam-pandeha. Saingy tsy nisy mpanao lalàna teo an-toerana na fanjakana na federaly nandrara ny polisy tsy hampiasa hery tsy mahafaty. Fa kosa, ny mpanao lalàna amin'ny ambaratonga rehetra dia mbola mamela ny polisy ho avo indrindra indrindra hampiasa herisetra mahafaty izay avelan'ny lalàna momba ny lalàm-panorenana. Mampiseho tokoa ny fampitahana amin'ny polisy fa lasa lavitra loatra ity fahalalàna ity mba hiarovana ny polisy amin'ny vidin'ny fahafatesan'ny sivily.
Hita amin'ny: https://www.eff.org/pages/body-worn-cameras
[Navoaka tamin'ny Oktobra 18, 2017].
Hita amin'ny: https://www.policeone.com/police-products/body-cameras/articles/10-limitations-of-body-cams-you-need-to-know-for-your-protection-Y0Lhpm3vlPTsJ9OZ/
Hardy S, BLRPCSWPP-HS, 2017. Fahasalamana ara-tsaina amin'ny fitsaboana amin'ny fianakaviana. [Online]
Hita amin'ny: http://www.mhfmjournal.com/old/open-access/the-feasibility-of-using-body-worn-cameras-in-an-inpatient-mental-health-setting.pdf
Ketchell, M., Janoary 18, 2016. NY FIVORIANA. [Online]
Hita amin'ny: http://theconversation.com/u-s-laws-protect-police-while-endangering-civilians-52737
PASTERNACK, A., nd CCOMPANY TALOHA. [Online]
Hita amin'ny: https://www.fastcompany.com/3062837/it-fell-off-body-camera-problems
Ny fakan-tsary amin'ny vatana mety tsy ho Didy farany no farany niova: Desambra 3rd, 2019 by Admin
3005 Total Views 12 Views Today